Izindaba - Indlela Yokusika & Ukuqinisa Ukuhlobisa Okuhlanganisiwe
Njengoba isithombe esibheke phezulu sikhonjisiwe, mhlawumbe indawo yakho ifana nalena, ayijwayelekile futhi ufuna ukuyiklama ngesitayela esehlukile.Kodwa ifektri ye-WPC yokuhlobisa ihlala ikutshela ukuthi izokhiqiza umkhiqizo owodwa noma emibili yobukhulu nobude. lezi, ungacabanga ukuthi ukwakheka kwakho akukwazi ukwenziwa.Ungakhathazeki, ukuhlanganiswa kwe-WPC kunganqunywa ukulingana izesekeli zokucaciswa okuhlukile, okuhlanganisiwe nakho kungaphucwa, kubethelwe, kuboshwe.Ngomusa hlola amathiphu angezansi, uzokwenza kalula kwenze wedwa.
Ungenza ukusika okulula kokungena ukumaka okuyinhlanganiselangendlela efanayo osika noma iyiphi iphayini elithambile — isaha eliyisiyingi elisebenza ngamandla lizosebenza kahle. Isarha yamandla kagesi inganikeza ukusikeka okunembile kakhulu, okuqondile, futhi itafula elibonwe ngezandiso zokusekelwa lingenza zonke izinhlobo zokusika zibe lula. Kuphakanyiswa izindwani ezinama-carbide — amazinyo ambalwa iba ngcono ekusikeni okushelelezi. Ungavumeli ama-blade ashise ngokweqile lapho usika njengoba lokhu kungadala ukusikeka ukuthi kusontwe noma kugudluzwe.
Uma ufaka i-decking ezungeze isakhiwo esivele sikhona, i-router elula ingasetshenziswa ukwenza ukusikeka okugobile. Ukusika okuhlanzekile akufanele kushiye noma imuphi udoti, kepha uma udinga ukuhlanza onqenqemeni, uphakamise ukuthi awusebenzisi isander. AbakwaSanders bazolimaza ukuqeda futhi ezimweni eziningi benze iwaranti yakho ingasebenzi. Isaha lokulwa ngesandla lizosebenza kahle ekubusheleleni imiphetho eseqedile uma kudingeka.Ungasika indawo yokuma ngaphandle njengengqondo yakho, kudingeka nje uqaphele!
Isikhala esingeziwe naso sibalulekile phakathi kwamaphethelo ebhodi nalapho amabhodi ahlangana nodonga lapho ukuhlobisa kugxila kokunye odongeni. Phakathi kwamabhodi okuphela kokuphela, vumela isikhala esingu-3/16-intshi. Lapho ibhodi liphela lihlangana nodonga, shiya igebe elinempilo elingu-1/2-intshi ukuqinisekisa ukuthi okokusebenza kunganwetshwa futhi kwenziwe isivumelwano ngaphandle kokuhlangana nodonga. Lokhu kuzokhulisa impilo ende yedeski futhi kuvimbele ukukhothama ngesikhathi esishisayo sosuku.
Amabhodi wokuhlobisa we-WPC angafakwa kwizibambo zezinkuni eziphathwayo ngezikulufo noma ngezihlanganisi ezifihliwe. Kusetshenziswa izikulufo zekhonksi elihlanganisiwe kubalulekile ngoba zenzelwe ngokukhethekile ukusiza ukubamba lokho okukhona endaweni.
Yize ibhodi lempahla elihlanganisiwe lizinzile ukwedlula iphayini ejwayelekile, lisengaphuka lapho kushayelwa izinto zokubopha eduze kwamaphethelo. Izimbobo zokushayela ngaphambi kokumba zingavimbela lokhu ukuthi zenzeke futhi zenze ukufakwa kuhambe ngokushesha okukhulu nangokubushelelezi. Esikhundleni semigodi yokushayela, abanye abakhiqizi basikisela ukubhoboza umgodi wokuqalisa cishe nge-1/8 intshi ukujula entweni leyo. Khetha usayizi omncane ongububanzi obufanayo nobumaphakathi besikulufu futhi unakekele ukungangeni ujule kokuqukethwe.
Cindezela izikulufu kodwa hhayi ezijulile kunekhanda lesikulufa. Ngaphandle kokudala ukuphela okunamandla, ukucwaninga okujulile kunganciphisa ukusebenza kwe-fastener futhi kungasebenzi iwaranti. Kubalulekile futhi ukuthi zonke izikulufu zivikelwe nge-90-degree angle emabhodini. Ukushesha ohlangothini kungadala ukufiphaza ebusweni obuhlanganisiwe futhi kumoshe ukuqeda.
ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC phansi, WPC decking phansi, WPC decking ongaphandle, WPC decking esiyinhlanganisela, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle,